ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: January 2010
အမေ …. ခုတလော သမီးစိတ်တွေရှုပ်တယ် အမေရယ် … စိတ်လဲမကောင်းဘူး ..
မြန်မာနိုင်ငံက ဆရာဝန်တွေ လူနာတွေအပေါ်စေတနာ တပြားသားဖိုးမှမရှိကြတော့ဘူးလား … အမေ့ကိုသမီးပြောပါတယ် … ပထမတစ်ခေါက်မျက်စိသွားပြကတည်းက ဆရာဝန်ကနောက်တစ်ဘက်က သွေးကြောတစ်ချောင်းယောင်နေတယ်ဆိုတော့ ကြိုတင်ကာကွယ်တာလုပ်ပါလို့လေ …
အမေ့ကို ဆရာဝန်က နေလို့ရသေးတယ် လကုန်မှလာဆိုတာနဲ့ပဲ အမေသူ့စကားကိုယုံပြီးတော့ မသွားဘူးလေ …. သူ့စကားအတိုင်း လကုန်သွားတော့ သူကယောင်နေတာပေါက်တောင်ပေါက်တော့မယ်တဲ့လား အမေ ….
ဒါဆို သူပြောတဲ့ နေလို့ရသေးတယ်ဆိုတာ ပေါက်တဲ့အထိစောင့်ခိုင်းတာလားအမေ ….
လေဆာပစ်တယ်ဆိုတာ သွေးကြောမပေါက်အောင်ပစ်တာလား … ဒါမှမဟုတ် ပေါက်အောင်ပစ်တာလား အမေ ….. အချက် ၂၀၀၀ တဲ့ …. နည်းသလားအမေရယ် …
အမေ့မျက်စိဘယ်လောင်တောင်နာလိုက်ရှာမလဲ …. သမီးစိတ်မကောင်းဘူးအမေ ….
အမေက ဆရာ့ကိုလေဆာပစ်ရင်သက်သာမလားမေးတော့ ဆရာက ဒါကတော့ ကံပဲတဲ့လားအမေ ... ဒီလိုလက်လွတ်စပယ်တော့မပြောသင့်ဘူးနော် … ပစ်လဲပေါက်မယ် မပစ်လဲပေါက်မယ်ဆိုရင် အမေ့မျက်စိကို အနာမခံသင့်ဘူးအမေ …. ပထမတစ်ဘက်တုန်းကလဲ လေဆာပစ်ပြီးရင်ကောင်းသွားမှာတဲ့ … ပစ်လဲပစ်ပြီးရော မျက်ကြည်လွှာမှာ အမာရွတ်ထင်သွားလို့ အရှင်းမမြင်ရနိုင်တော့ဘူးတဲ့ … လေဆာပစ်လို့ အမာရွတ်ဖြစ်သွားတာလားအမေ … မျက်ကြည်လွှာလဲရင် ရနိုင်မလားဆိုပြီး သီတဂူမှာ သွားမေးခိုင်းတော့ စမ်းသပ်ပြီး ဒါ မျက်ကြည်လွှာနဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုပြီး Register လုပ်ခွင့်မပေးပြန်ဘူး … ဘယ်ဆရာဝန်စကားကမှန်သလဲအမေရယ် … သူတို့ပေါ်မှာ သမီးတို့တွေကျန်းမာရေးကို အပ်ဖို့ ဆိုတာ ယုံကြည်ရပါ့မလားအမေ … သမီးအရမ်းစိုးရိမ်တယ် အမေရယ် … တစ်ဘက်က သိပ်မမြင်ရတော့ဘူး … ခုနောက်တစ်ဘက်ကထပ်ပြီး သိပ်မမြင်ရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အမေရယ် …. အမေ့ရဲ့ကျန်တဲ့ မျက်စိတစ်ဘက် ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ သမီးဆုတောင်းပါတယ်အမေ ….
မှတ်ချက်။ ။ သူငယ်ချင်းတို့ရေ ... ဆီးချိုသမားမျက်စိဝေဒနာရှင်တွေကို ကုတဲ့မျက်စိဆရာဝန်ကောင်းကောင်းလေးများရှိရင် ညွှန်ပေးကြပါနော် .... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ....
Posted by ကြယ်ပြာ at 11:27 AM 19 comments Links to this post